Doorashada Maraykanka ma lagu shuban karaa?
Trump oo sheegay in Doorashada la xadayey muddo bilo ah….
laba sanduuq doorasho
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku andacoonayaa in “Isdabamarin dhanka codadka Doorashada ah” ay ka jirto dalka Mareykanka. tani waxay keentay su’aasha ah Doorashada Maraykanka ma lagu shuban karaa?.
Kooxda u ololeynaya Donald Trump ayaa sheegaya in “doorashada la xadayay” muddo bilooyin ah, iyagoo eedeynaya warbaahinta oo ay ku sheegeen ku dhinac u xaglinaya oo aan la aamini karin.
Sidoo kale saxaafadda ayey ku tilmaameen inay garab siinayaan Hillary Clinton, si xisbiga Jamhuuriga looga adkaado doorashada.
Laakiin hadda hadalkaasi wuxuu gaaray meeshii ugu sarreysay. Donald Trump ayaa waxa uu billaabay dood dhanka Twitter-ka ah oo uu ku xoojinaayo eedaha uu soo jeedinayo.
Dooda Mr Trump ee ah in “Doorashada lagu shubanayo” waa eeddii ugu halista badneyd ee uu Trump usoo jeediyo.
Kaligii kuma eko dareenkaasi. Taageerayaasha Jamhuuriga, seddax meelood meel oo kali ah ayaa aaminsan in doorashada ay tahay mid xaq ah, sida ay xustay wakaaladda wararka ee AP.
Si kastaba, cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa ay muujineysaa in dalka Mareykanka aanan si weyn looga aqoon in codadka doorashada la xado.
Sanadkii 2014, Justin Levitt, oo ah xirfadle ka tirsan iskuulka sharciga ee Loyola, waxa uu helay 31 kiis oo la xiriira isdaba marin codad oo ku saabsanaa hal bilyan oo codad doorashooyin dhacay intii u dhexeysay 2000 illaa 2014-kii.
Fikradda ah in doorashada Mareykanka lagu shubto ma ahan mid “qalafsan”, “mana loo xadi kara qaabka uu Trump sheegayo,” sidaasi waxaa sheegay Richard Hasen oo ah khabiir ku takhasusay sharciga doorashada.
“Ma suuragali karto in kumannaan qof ay 5, ama 15 jeer codeeyaan, ayagoo aanan la qaban,” ayuu yiri Prof. Richard.
Image captionQofka codeynaya waxaa laga doonayaa kaarka codbixinta
Saraakiisha doorashada ee dalka Mareykanka awoodoodu waa mid baahsan. Gobol kastaa wuxuu qabaa shuruucdiisa u gaarka ah, waxaana kor meeraya shaqaalaha guddiga doorashada.
Gobolka Philadelphia ayaa sanadkii 2012kii baaritaan lagu sameeyay ka dib markii musharrixii madaxtinnimo ee Jamhuuriga Mitt Romney uu hal cod xittaa ka heli waayay 59 xarumood oo magaalada ku yaalla.
Hadaba ma dhici kartaa in doorashada la xado?
Arrinta muhiimka ah ee ku jirta hadalka ololaha Trump uu soo jeedayay ee ku saabsan ku shubashada ayaa waxa ay tahay inay jiri karto in dad ay codeeyaan marar badan maalinta doorashada, taas oo cilmi baarista ay muujineyso inay ka mid tahay isdaba marinta ugu yar, sida uu qabo Prof. Mayer
Waxa uu sheegay in musuqa ugu badan ee doorashada ay sameeyaan saraakiisha doorashada.
Waxaa dhici karto inay u xadaan hab la xiriira sanduuqyada codeynta ama codad lawaayay iyo codbixiyayaasha maqan.
CADAALAD doorasho RICHARD SHUBASHO siyaasad TRUMP usa	2016-10-18
Previous: Alshabaab oo weeraray Afgooye
Next: Halkan Ka AKhriso Khudbadii Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Uu Ka Jeediyey Shirka Golaha Dhexe Iyo Qodobada Uu Ka Hadlay